Famerenana lalina ny Doogee DG700 Titans 2 | Androidsis
Androany dia faly aho mampiseho aminao ny famakafakana feno an'ity terminal ity avy amin'ny orinasa sinoa Doogee mahagaga antsika izany amin'ny alàlan'ny terminal sy kalitao avo lenta amin'ny vidiny tsy hay tohaina. Ny anaranao Doogee DG700 Titans 2.
Ny solonanarana Titans 2 amin'ity Doogee DG700 ity de afaka mahazo azy ambany noho ny 120 euro isika, Tsy apetraka satria raha tsy kisendrasendra na fikasana fotsiny, ary io no manaitra sy terminal mafy, natokana ho an'ny mpihaino tena manokana toy ny atleta na mpiasa manana asa heverina ho mafy toy ny asa rehetra mifandraika amin'ny tontolon'ny fananganana, mpanao biriky, mpiasa, mpanao hosodoko, mpanao asa-tanana sns. Ary io terminal io no ahitanao azy, iray amin'ireo toetra mampiavaka azy izay ho hitantsika ao aminy fanoherana ny fianjerana sy fikorontanana ary koa ny fanamarinana IP67 azy izay mahatonga azy mahatohitra ny rano sy ny vovoka.
1 Famaritana ara-teknika Doogee DG700 Titans 2
2 Hevitra matanjaka hanasongadinana ny Doogee DG700 Titans 2
3 Toro malemy hanasongadinana ity Doogee DG700 Titans 2 ity
Famaritana ara-teknika Doogee DG700 Titans 2
modely Doogee DG700 Titans 2
efijery 4'5 "IPS misy vahaolana 540 x 960 teboka 245ppi
processeur Mediatek MTK6582 quad-core 1 Ghz
Rom 8 Gb ho an'ny fametrahana ny Apps 1'44Gb
Fakan-tsary aoriana Megapixel 8 misy FlashLED
Conectividad 2G - 3G - NFC - Bluetooth 4.0 - Wifi - Spot Wifi - GPS sy A-GPS
fepetra 72'4 x 141'7 x 13 mm
lanja 200 gr.
bateria azo esorina 4000 mAh polymer lithium-ion
ny hafa Dual SIM - fanamarinana tsy misy rano sy vovoka IP67 ary fanohanana MicroSD
vidiny Latsaky ny 120 Euros
Hevitra matanjaka hanasongadinana ny Doogee DG700 Titans 2
Tsy misy isalasalana fa ny tanjaka lehibe an'io Doogee DG700 Titans 2 isika dia afaka mahita azy amin'ny famaranana avo lenta, famaranana izay mampifangaro vatan'ny vy maheryamin'ny vita vita amin'ny hoditra sy vera fanoherana lehibe izay mahatonga azy ireo hahatohitra indrindra ny fianjerana hatramin'ny iray metatra sy sasany ny haavony.
Etsy ankilany, ilaina ny manonona, indrindra amin'ny vidiny ambany, fa manana ny fanamarinana IP67 iraisam-pirenena izay ataon'izy ireo vovoka sy rano mahatohitra. Fantsona iray mahazaka fanoherana ny alentika ao anaty rano iray metatra sy sasany ny halaliny ary mandritra ny telopolo minitra nefa tsy misy karazana fahasimbana na iray amin'ireo singa ao aminy. (mijery horonan-tsary).
Etsy ankilany, ny kalitaon'ny feo tena tsara, feo iray mazava sy mahery noho ny fitenenana an-tsoratra ao ambany faran'ny terminal. Raha ny fakantserin'izy ireo, na ny anoloana na 5 megapixel na ny ao aorian'ny 8 megapixels misy flasLED anatiny, dia manolotra anay izy ireo sary avo lenta nalaina tamin'ny toe-jiro tsara, manana hafainganana mamaly ao anaty vavam-baravarankely mendrika hotononina ary avo lavitra noho ireo fakantsary tafiditra ao anaty marika hafa misy terminal misy fiaviany sinoa ary mitovy ny vidiny.
Farany dia iray amin'ireo zavatra lehibe manasongadina momba an'io Doogee DG700 titans 2, dia ny batterie 4000 mAh azo esorina lehibe, batery lehibe manome antoka ny fizakantenan'ny telo andro, mampiasa ny terminal hatrany amin'ny fomba antonony. Izy io aza dia afaka miasa noho ny fampiasa OTG, toy ny Power Bank na bateria ivelany hamerenana ireo fitaovana hafa raha sendra misy filàna.
Toro malemy hanasongadinana ity Doogee DG700 Titans 2 ity
Raha ny amin'ireo teboka malemy hasongadiny, ny hevi-dehibe azonay lazaina dia ny fahatsiarovana anatiny kely sisa tavela ho an'ny fametrahana ny rindranasa sy ny lalao, fa na dia manana fahatsiarovana anatiny 8 Gb aza ilay terminal, dia tokony hotadidina fa nampisaraka izy ireo, navelany fotsiny isika 1,44 Gb amin'ny fametrahana rindrambaiko sy lalao.
Ny iray amin'ireo teboka na teboka malemy izay azontsika heverina ho mendrika hotononina dia ny refy avo lenta amin'ny halehibe sy lanjan'ny terminal. Fantsona tsy misy zavatra hafa ary tsy latsa-danja ihany koa 13 milimetatra matevina ary tsy misy mihoatra ary tsy misy hafa noho ny 200 grama ny lanjany. Ny fandrefesana sy ny lanja sasany izay filaharan'ny andro raha ampitahaintsika amin'ny faran'ny fomban'ireo mpanamboatra fanta-daza hafa.
Ho an'ny ambiny, terminal izay tia ny fahombiazany sy ny hafainganan'ny valiny amin'ny fampiasana fampiharana isan'andro ary na amin'ny fampiasana lalao hafa noho ny iray hafa, na dia tadidintsika aza fa ity terminal ity dia tsy natao manokana ho an'ny mpihaino gamer fa kosa ho an'ny mpijery izay te hanao fanatanjahan-tena tafahoatra na terminal mifantoka amin'ny tontolon'ny miasa ary manokana ho an'ireo olona manana asa any an-tsaha na asa heverina ho tena sarotra.
Tsy isalasalana fa terminal izay nanome azy tahan'ny kalitao / vidiny tsy azo resena, Tsy manan-javatra hafa atolotra anao manokana aho. Tsarovy izany afaka mahazo an'ity rohy ity ihany isika ho an'ny zavatra kely noho 120 euros.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Notsapainay tsara ny Doogee DG700 Titans 2, ilay terminal misy fanamarinana IP67 latsaky ny 120 Euros
Traceur dia hoy izy:
Manazava tsara, arahabaina, tendron-teny kely fotsiny: tokony afindrao lavitra ny fakan-tsary rehefa manoratra ianao mba tsy hifikitra loatra amin'ilay solomaso ny telefaona sy ny tananao. Fiarahabana avy any Mexico
Valiny tamin'i Traceur
Salama, ekipa tena tsara, ny fanontaniako dia hoe, azoko atao ve ny mampandeha azy ho anao, mipetraka any Kolombia aho. misaotra anao mamaly haingana
Mamaly an'i marlon
Tere hdez dia hoy izy:
Salama, tiako be ny telefaona, efa ananako ... ny hany toerana kely misy azy ... ary raha afaka mizara toro-hevitra ianao hahitanao fomba iray hiasa amina fampiharana bebe kokoa ao aminy ....
Valiny tamin'i Tere Hdez
Manana lesona momba ny Androidsis momba ny fomba famindrana fampiharana sy lalao amin'ny sd ianao.
Fanontaniana? Efa nahazo ny fanavaozana an'i Lollipop ve ianao? Nilaza tamiko i Doogee fa efa misy io ary tena tsara ho anao izany satria afaka mamindra fampiharana sy lalao amin'ny sd ianao nefa tsy manao tetika.
SergioFM95 dia hoy izy:
Tsara, efa naniry ny hividy azy nandritra ny andro maromaro aho, saingy tsy dia azoko antoka ny fanoherana azy amin'ny rano. Efa nohazavaina ny fisalasalako rehetra, misaotra betsaka.
Valiny tamin'i SergioFM95
Fihetseham-po tena tsara rehefa voaray nefa miaraka amina rano kely famafazana dia mampivoatra teboka mando ilay efijery, mahamenatra… Menatra !!! Fanapahan-kevitra tena izy, tsy misy fandeferana na fandoavam-bola, FANOMPOANA LEHIBE FA TSY MISY INDRINDRA, ny alatsinainy ho avy izao dia miverina, manao dokambarotra sy lainga mamitaka.
Nahazo azy io tamin'ny Desambra 2014 ary tamin'ny volana Aogositra 2015 dia nijanona tsy niasa intsony ny efijery, tsy nisy fipoahana, tsy nisy rano, tsy nisy, nipetraka teo ambony latabatra misy kafe ihany aho.
Ankoatr'izay dia mandefa hafatra indraindray ny telefaona fa novonoina izy io satria mafana, ary maty izy io
Raha mametraka micro sd xq aho dia tsy mandeha izany tsy azoko atao ny misintona na mitahiry sary na mihaino audios aza dia mitranga izany raha vaovao ny micro sd ary mandeha ara-dalàna amin'ny telefaona hafa ???
Mamaly an'i armida
Felipe G dia hoy izy:
Efa ho 2 taona izao no nahazoako ilay telefaona. Ary tsara dia tsara izany, tsy manenina amin'ilay safidy aho. ny teboka tokana manohitra dia ny memora, izay vahana amin'ny 5 USD. Tena tsara!
Valiny tamin'i Felipe G
Rangel dia hoy izy:
Salama avy any Kolombia, efa nanontany aho fa amin'ny fanehoan-kevitra tsy mahafinaritra maro dia maro, tsy haiko raha afaka manenina aho.
Te hahafantatra aho raha afaka mampihetsika azy amin'ny Claro ???
Mamaly an'i Rangel
Emilio Arturo Figueras Leon dia hoy izy:
Nahazo ny telefaona DOOGEE DG700 TITAN S2 nandritra ny roa taona mahery aho ary ankoatry ny fisehoana tsara nananan'ireo fitaovana ireo dia tsy afaka milaza izany mitovy amin'ny fampiasa azy aho ary manana teboka marobe toa ny faharetany mifandray amin'ny Internet. ary rahoviana azo atao ny mametraka fifandraisana dia mahantra sy tsy milamina. Tsy haiko raha misy ifandraisany amin'ireo mpandraharaha an-tariby na misy olana amin'ny fitaovana.
Valiny tamin'i Emilio Arturo Figueras Leon
Sony Xperia E4, nanolotra ny elanelam-potoana vaovao an'ny mpanamboatra Japoney